नाकाबन्दीबाट निर्माणको पाठ सिक्दैछन् विद्युत व्यवसायी
| Nov-10,2015 01:25:37 Published
हतारहतार काठमाडौं विद्युत् व्यवसायी महासंघको कार्यालय पुगें । हातमा शुभकामना पत्र थियो । उद्देश्य थियो तिहारको शुभकामना दिने ।
प्रतिक्षासँगै संघका अध्यक्ष शंकर देवकोटासँग भेट भो । कुरा सुरु भो । राष्ट्रिय समस्याका जडहरु विषय बने छलफलमा ।
निर्माण सञ्चारको तर्फबाट म उभिएको थिएँ सान्दर्भिक अन्तर्वाताका लागि । व्यापार कस्तो छ भन्ने कुराबाट उठान भो भलाकुसारी । नाकाबन्दीको मारमा के चाहियो र अरु ! ‘व्यवसाय च चौपट छ,’ उनको कथन थियो । भन्दै गए अध्यक्ष देवकोटा । आउनुपर्ने सामान अझै आएको छैन । सुनौली नाकामा आएर बसेको दुई महिना भयो । तिहारको सिजन । मारामार हुनु पर्ने व्यापार ।
तर सुख्खायाममा खेतका गह्रा फुटेझैं फुटेको छ अर्थतन्त्र । कहिले फल्ने होला त हाम्रो देश ?’ प्रश्नवाचक लाग्यो उनको कुरामा ।
टक्क अडिदै मैले भने, निर्माण मिडिया नेपालकै निर्माण क्षेत्रको पहिलो मिडिया हो । नाकाबन्दीले यो क्षेत्रलाई पनि त डसेको छ नि भन्दा उनले थपे, ‘मध्य व्यापारको यो समय अहिले २० प्रतिशतमा झरेको छ । ढुवानीका लागि नेपालबाट ट्रक पठायो भारत जान दिदैन ।
यदि रक्सौल काटेर पारि गायो भने सामान दिंदैन । सामान केही गरी दियो भने पनि फेरि गाडि फर्कन दिएको छैन । यो त अति भो नि भारतले गरेको ? पैसा तिरेर सामान ल्याउने हो । सित्तैमा त हैन नि ! युद्धमा समेत जनताका दैनन्दिन गुजारका सरसामान रोक्न मिल्दैन भन्छन् । औषधीदेखि खाद्यान्न सबै रोकेको छ भारतले । कुहिने वस्तु पठाएको छ । आलु र प्याज । इन्धन त रोकेको रोकै त छ । उफ् ।’
यसरी निरास भएका एउटा व्यवसायीलाई मैले के शुभकामना दिने होला । तिहार र छठको शुभकामना कार्ड हातबाट अघि सार्न मलाई हिम्मतै जुटेन । तैपनि !
उनी मात्र व्यवसायी पनि हैनन् । इलेक्ट्रोनिक व्यवसाय जगत्का सशक्त नेतृत्वकर्ता पनि हुन् देवकोटा । नेतृत्व गर्ने अगुवा आफैंमा निरास हुने कुराले यो क्षेत्रको नेतृत्व कसरी गर्ने ? भोलिका दिनमा देशको नेतृत्व पनि त गर्ने अवसर आउन सक्छ ?
मैले निरास हुन नमिल्ने तर्क गर्दै उनलाई प्रश्न जस्तो गरें । कुरा चल्दै गयो । निर्माण क्षेत्र यतिखेर नाकाबन्दीको मारमा परेको उनले बताए । ढुवानी रोकिंदा सामान आएन । रड आएन । रोडा आएन । अरु कच्चा पदार्थ आएनन् । अनि निर्माण हुँदै गरेका घरदेखि चौतारो पनि त रोकिने भो नि ! अन्त्यमा आइपुग्दा देवकोटा आशावादी बन्न पुगे ।
निर्माण जगत्मा प्रयोग हुने विद्युतीय सामाग्री खपतको अहिलेको मूल स्रोत नेपालका लागि भारत नाभएर चीन भएको उनले बताए । ठिक छ व्यापार घाटा त छ । नाका पनि त सधैं बन्द हुँदैन । भारतको पनि त व्यापार हो ।
७० प्रतिशत भन्दा बढी भारतको आफ्नो बजार हो नेपाल । तर उसैको कारण नेपाली बजामा चीन भित्रिएको छ भने घाटा कसलाई हुन्छ ? उनी अब एक व्यापारी हैन कि नीति निर्माताझैं विश्लेषण गर्दै थिए ।
अघिको निरास इलेक्ट्रोनिक व्यापारी अहिले साहसिक नेतामा रुपान्तरित भएको मैले जब बुझें दिएँ तिहारको शुभकामना कार्ड । उनले सरकारसँग केही अपेक्षा राखेका छन् व्यापार घाटाबारे । आपूर्ति र ढुवानीबारे । बोर्डर समस्या र घरभाडासम्मका । सफ्ट लोनदेखि सबै कुरा भए ।
इलेक्ट्रिोनि आइटमहरु सिजनल सामाग्री हुन् । नेपालमा यी सामान भण्डारण गर्ने व्यवस्था छैन । बिक्री नभए वर्षदिनभित्रै बिग्रन्छ । तिनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन । बैंकसँग लोनमा काम गर्दा पनि डुबिने डर त्यतिकै छ ।
जबकि जल सम्पदामा विश्वको दोस्रो धनी नेपालमा विद्युत् उत्पादन हुने हो भने आज खाडी मुलुकमा गएका सबै युवाहरु इलेक्ट्रोनिक सामान बनाउन र बेचेरै नभ्याउने दिन पनि त नेपालमा आउन सक्छ नि । तर गर्नु पर्याे । गर्ने कसले ? बस्, हामी हामी सबैले !
यसरी दीपावलीको शुभकामनासँगै देशको सुखदुख साटेर हामी विदा भयौँ ।
काठमाडौं विद्युत् व्यवसायी संघका तर्फबाट उनले दिए सबै व्यवसायी तथा ग्राहकहरुका शुभकामना !
प्रस्तुति : ऋषि खतिवडा